စနေလင်း| January 30, 2013 | Hits:28,172
25 Responses LeaveaReply Cancel reply
ဂျာနော် January 30, 2013 - 9:09 pm မင်းတို့ သတင်းလိုက်ယူတာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး၊ သေရင် အစိုးရကို အပြစ်ပုံချအုန်းမယ်။မျှမျှတတ သတင်းတွေကို တင်ပါ သတင်းမီဒီယာများ အားလုံး။
Reply kyaw lwin January 30, 2013 - 9:09 pm အစိုးရက လာမည့် ဖေဖဝါရီလ(၃၁)ရက်မှ စတင်ပြီး ရှေ့တန်းကိုလိုက်ပါ သတင်းယူခွင့် ပြုတော့မည်ဟု ကြားသိရပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
Reply Linyone January 31, 2013 - 12:18 pm I heard them saying too. February 31.
Reply မြန်မာပြည်သား January 30, 2013 - 9:19 pm စစ်တပ် ဘက်က မှန်တယ်ဆိုရင် လည်း ၈၈ အရေးတော်ပုံမှာ သေဆုံးခဲ့ရသူ စာရင်းတွေ၊ ဘာကြောင့် စစ်တပ်က လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို သေနတ်နှင့် ပစ်သတ် နှိမ်နင်းခဲ့တာတွေ၊ နောက်ပြီး အမေရိကန် က ကျူးကျော်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး မုသာဝါဒမှိုင်းတွေ ဘာကြောင့်၊ ဘယ်သူ့ အမိန့်ကြောင့် အစိုးရထိန်းချုပ် သတင်းဌာန တွေကထုတ်လွှင့်ခဲတာတွေ က စပြီး အားလုံးကို ပြည်သူ ကို ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး တတိယ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ကို တာဝန်ပေးပြီး သမိုင်းကြောင်းကို တတ်နိုင်သလောက် အမှန်ဖြစ်စေရေး စသည် တို့ကို သမိုင်း တရားခံ တပ်မတော် မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုပေးပါလို့ ဂျိုကုတ်ဒူးကြီး မအလ ကို တင်ပြပါရစေ။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 31, 2013 - 3:12 am သတင်းသမားတွေက မဟုတ်တာတွေ အဟုတ်လုပ်ရေး၊ မသေချာတာတွေ ရေးရင်တော့ အပြစ်ပြောပေါ့။ အခုက သူတို့မှာ ရေးစရာကို မရှိလို့ မရေးရတာ အပြစ်ပြောလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ သူတို့ပြောတာလဲ ဟုတ်တာပဲ … ရေးစေချင်ရင် သတင်းပေးပေါ့။
Reply Pangmu Shayi January 31, 2013 - 3:20 am Thank you for coming out swinging on the side of truth and justice. The truth shall set us free!
Reply Lightning January 31, 2013 - 3:26 am So, the Burmese junta is always the problem. The junta always needs to cover what they have been doing to the people. If they do things in the right way, they may not need to cover up. However, they rape, they torture, they kill, they steal and they rob. That’s why these soldiers are bitterly hated. Burmese military shamelessly accused media of fabricating about the Kachin War. Actually, the military is never trustworthy. They say one thing now, they do different thing later. We have known their true nature for too long and they do not need to tell us that they are good. The vampires do not need to try to convince us that they no longer suck blood while their mouths still stained with blood. The same generals and the same soldiers with the same administration will not change them good military men. They better shut up their big mouths.
Reply zaw January 31, 2013 - 8:35 am MEDIA is very important for population of country. you can make go down or up.
ReplyaJanuary 31, 2013 - 8:59 am သိပ်ကောင်းတယ်ကိုအားမာန်။အမှန်ပါပဲ။
Reply hotladylay January 31, 2013 - 9:01 am Very Good Editors this is Journalist’s Right to explain what is the Truth.Now your reasons were perfect unless you get Both side’s News who can you Balance the News are correct but The Medias are looking for the up date News that why you will pick up whatever you can get and establish the Original News in Original pictures & Voices as well VDO files.You are 100% right my Comrades .
Reply ကိုရဲ January 31, 2013 - 9:26 am သတင်းသမားတွေကိုလေးစားပါတယ်။ ဆရာသမားတို့ပြောတာလဲမှန်ပါတယ်။ စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာ တွေကိုတကယ်လိုက်ကြမှာလား။ အန္တရာယ်များတယ်နော်။ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်တာကိုအမှန်အတိုင်းရေးတယ်ဆိုရင်ရေးကြပါ။တကယ့်အမှန်သာရေးပေးပါ။ အသုံးအနှုန်းလေးတော့သတိပြုကြပါ။ အစိုးရတပ်ကို စစ်တပ်လို့သုံးပြီး KIA ကိုတော့ တပ်မတော်ဆိုတာမျိုးမသုံးကြပါနဲ့။ KIA ဗုံးခွဲတာမျိုးကိုလဲ ဖော်ပြပေးပါ။ ရထားကားမိုင်းခွဲလူသတ်ဆက်ကြေးကောက်ဘယ်နေရာမှာလုပ်လုပ် ရေးပေးပါ။ မိတ္ထိလာမှာ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ဖောက် ထွင်းမှု ဖြစ်တာမျိုး ဖော်ပြတာလဲလက်ခံပါတယ်။
Reply Linyone January 31, 2013 - 10:36 am Myanmarese military regime is king of fabrication. If the military regime expects fairness from others, then the regime needs to be fair to others first. We the people do not see no fairness on the news media. Why is the Myanmarese regime complaining the news media? Every eyewitness sees the same Myanmarese assault on the Kachins. Telling and revealing the truth is the job of every news media. Stop crying but treat the ethnics with respect and compassion.
Reply pps၁၂၃၄၅ January 31, 2013 - 1:11 pm ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်မမှ ဗမာတိုင်းရင်းသား ဦးအောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော လက်နက်မဲ့ အရပ်သား အစိုးရ နှင့် တောင်တန်းဒေသမှ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ မည်သည့် ဖိအားကို မှ လက်မခံပဲ မိမိတို့ဆန္ဒ အရ ပင်လုံစာချုပ်ကို သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဗမာပြည်ထောင်စု ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
Reply Ko January 31, 2013 - 2:27 pm No one except the relatives of so called tat-ma-daw who are blind or brainwashed for many decades trusts and supports Myanmar military. Cox history already proved that they are the liars. But I pity the poor soldiers fighting for nothing but sacrificing their lives. How brainless the military generals are! They had made our country so poor…poorest in Asean. I am sick to see they keep doing this stupid things. Wasting money and precious own countrymen’ lives!
Reply R.zar January 31, 2013 - 2:40 pm တပ်မတော် စစ်ဗိုလ်တွေ ရဲဘော်တွေ ဆီကနေ ဖြတ်ခုတ်ယူ ထားတာတွေ ၊ တပ်မတော်ထဲမှာ အထက်အောက် အနိုင်ကျင့်မှု များတာတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ချမ်းသာ ရဲဘော်ဆင်းရဲ ဖြစ်နေတာတွေ ၊ ရဲဘော်တွေ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားရင် ကျန်ရစ်သူမိသားစု အထက်အရာရှိတွေကို ကလော်ဆဲတာတွေ ၊ တပ်မတော်ထဲမှာ အောက်ခြေ အဆင့်တွေ မှာ တပ်သားတွေငတ်ပြတ်နေပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်တွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ နှင့်ချမ်းသာနေတာတွေ အားလုံး သတင်းစာ ဆရာတွေ မြင်မှာစိုးလို့ မလိုက်ခိုင်းတာပါ။
Reply မြန်မာပြည်သား January 31, 2013 - 4:47 pm သတင်းတွေ ဘက်လိုက်တယ်ဗျ။
Reply Mirror January 31, 2013 - 5:03 pm လျှို့ဝှက်အပ်စွာ အရာရာကို မာတာပီတ မိနှင့်ဘ ထား၊ မယားသော်မှ မပြောရတဲ့… ကြားဖူးဘူးလား…တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှ သတင်းပေါက်ရင် ခံရမှာပေါ့…. ခုကြည့်ပါလား KIA စခန်း အားလုံးနီးပါးကျကုန်ပီလေ… ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရှိ ဖော်ပြကျတော့ စစ်တပ်က အကြိုက်ပေါ့… စခန်းတည်နေရာ၊ လူအင်အား၊ လက်နက်အခြေနေ သိရမှတော့ ပီးပီပေါ့ဟ။ စစ်တပ်ရယ်….အမှန်ဆို ဒီမီဒီယာတွေကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ်…အဟက်..ဟက် ။
Reply ဆိုင်းရွယ်ရ် January 31, 2013 - 10:21 pm စစ်ပွဲ ဆိုတာ စစ်သားတွေတောင် မလွှဲမေ၇ှာင်သာလို့ တိုက်နေတာ မမြင်ချင်စရာ အနိဌာရုံ မြင်ကွင်းတွေပါ . ဒီမြင်ကွင်းတွေကို ၈၈ ခုနှစ် , ၈၉ ခုနှစ် မဲသရော မိုင်းယန်း မာနယ်ပလော တိုက်ပွဲ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ တင် မမြင်ချင်ခဲ့တော့ပါ . ကလေးဘဝ ၁၀, ၁၁ အရွယ် တည်းက စစ်ပွဲ ဆို တာရဲ့ အနိဌာရုံ ကို ကြောက်နေပါပြီ . မမြင်ဖူးသေးတဲ့ လူတွေကသာ စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ .
Reply saialltha January 31, 2013 - 10:26 pm်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေစုံစုံလင်လင်တင်ပေးပါ
Reply Oak Soe February 1, 2013 - 12:40 pm That is Myanmar Government and Myanmar Army. Of course no one know about them even they don’t know themselves. They never announce how many soldiers were dead in any battles. Even there are some cases leaders are shot by soldiers but there was no case file. We new that there arealot of Myanmar soldiers were dead in Kachin. For KIA/O, they have no choice because many myanmar soldiers were ordered to drink unknown medecine, some need to be injected for (hyper active and hyper emotion). Why we can say is that while KIA is shooting many of myanmar soldiers were climbing up they take off their clothes even the weather is so cold(even native kachins are needed to wear warm clothes). So, for journalists and news reporters to haveachance to follow with Myanmar army is so far (future impossible tense) because they are so secret and their ways is not good to be announced publicly.
Reply nay naiing thu February 1, 2013 - 1:23 pm ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသိဆုံးပါ သတင်းသမားအများစုကိုမဆိုလိုသော် လည်းသတင်းသမားများဟာ လည်းကောင်းတို့ ရပ်တည်နေရသော ဘဏ္ဍာရေး အရင်းအမြစ်ကို တော့ဘယ်တော့မှ မပစ်ပယ်နိုင်ကြောင်းအထင်အရှားသိသာလှပါတယ် ဒါအပြင် သတင်းဌာနစတင်ထူထောင်ခဲ့ တဲ့သမိုင်းကြောင်း ရင်းရည်ရွယ်သည့် (ပစ်မှတ်ထားသည့်) အဖွဲ့ အစည်း ဦးဆောင်နေသည့်လူများ၏ သဘောထား များမှာသတင်းဌာနကို တော်တည့်မှန်ကန်မှု ရှိနိုင်ခြင်းအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ပါကြောင်း ထင်ရှားပါတယ် ဒါကြောင့်သတင်းများအတွက် ရပ်တည်မှုတစ်ခု ပေါ် မှာဇောင်းပေးဖေါ်ပြနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ် ဒီတွင်းမှာရှိနေသော သတင်းမီဒီယာများဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်ထိမ်းချုပ်ခံခဲ့ရသည်ဖြစ်ပြီးထိမ်းချုပ်မှုများမှာလည်း အစိုးရ၏မူဖြစ်၍ အစိုးရအပေါ် အမြင်ကြည်လင်မှုအပြည့်အ၀မရှိနိုင်သည်မှာ သိသာထင်းရှားသော ယခုထုတ်ဝေနေသော သတင်းမီဒီယာ များမှာအထင်အရှားတွေမြင်ရပါတယ် ဒီအတွက်ကြောင့် ကချင်နဲ့ တပ်မတော်အကြားသတင်းများကိုဖေါ်ပြရာမှာ ကချင်သောင်းကျန်းသူများ အပေါ်စာနာမှုဆိုတဲ့ အနေအထားကိုဇောင်းပေးဖေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများ သတိလစ်နေသည်မှာ ပြည်သူလူထုအားလုံးက ကချင်သောင်းကျန်းသူများ၏ နိုင်ငံတော်ကို လက်နက်စွဲကို တိုက်ခိုက်နေမှုများအားလုံး နှင့် လည်းကောင်းတို့ ဆောင်ရွက်နေမှုများအားလုံးကို ထောက်ခံ လက်ခံ နေမည်မထင်ရကြောင်း ကိုမေ့လျော့နေသည်မှာထင်ရှားလှပါတယ်
Reply pps၁၂၃၄၅ February 1, 2013 - 2:39 pm ပင်လုံ စာချုပ်တွင် လက်မှတ် ထိုးခဲ့သော အဖွဲ့များတွင် တပ်မတော် မပါဝင်ခဲ့ပါ။
Reply ဖဖီ February 2, 2013 - 11:15 pm ထေါက်ခံပါသည်။
Reply KnooKnow February 3, 2013 - 10:32 am သောင်းကျန်းသူဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သေချာစဉ်းစားပြီးမှ သုံးပါ။ ကေအိုင်အေ ဆိုတာ သူများပိုင်နက်တွေကို ကျူးကျော်ပြီး တွေ့ကရာထင်က၇ာ ပရမ်းပတာ ရမ်းကားလုပ်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး..သူများနယ်မြေ သူများနေအိမ်တွေအထိဝင်ပြီး သောင်းကျန်းနေတာ ဘယ်သူလဲ သေချာစဉ်းစားစဉ်ချင်ပြီးမှ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကို ရွေးချယ်ပါ။
Reply army2 February 10, 2013 - 3:41 pm yes.i like